Gingilcha Ufmaa raawwachuu - LibreOffice Help
Gingilchootnii fi Gingilchootni olaanoo tarreewwan hammangaa deetaa gingilchaman muraasa(galmeewwan) irratti hojjechuu si dandeessisu. Wardiilee LibreOffice keessatti gingilchaawwan fayyadamuuf carraalee adda addaatu jiru.
Fayidaan dalagaa Gingilcha ufmaa inni tokko argama tarreewwan galfatoota dirree deetaa keessatti walfakkaatan saffisaan ittisuu dha.
Qaaqa Gingilchi Durtii keessatti, hangiiwwan kan gatiiwwan dirreewwan deetaa murtaa'an qabatan qindeessuus dandeessa. Haalleen hanaga sadiitti ogeejjii yaayaa FI ykn YKN dhaan walqabsiisuuf gingilchaa durtii fayyadamuu dandeessa.
Gingilchaa olaanaa hanga haalota gingilchaa waliigalaa 8tti hayyama. Gingilchaawwan olaanoodhaan haalota kallattii wardiitti galchita.
Yeroo tarreewwan hedduu naannoo gingilchaan itti fayyadamerraa filattu, filannoon kun tarreewwan mul'atanii fi tarreewwan gingilchaadhaan dhoksaman dabalachuu danda'a. Ati yoo dhangeessuu fayyadamtu, ykn tarreewwan filataman haqxu, gochi kun tarreewwan mul'atan qofaarratti fayyada. Tarreewwan dhokatoo hin tuqaman.
Kun faallaa tarreewwan ajaja Dhangii - Tarree - Tarreewwan Dhoksitiin hujeekaan dhoksamaniiti.
Gingilcha:Gingilchaawwan Olaanoo Raawwachuu
Maadheele mul'atana qofa garagalchi
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Calc/Applying_Filters/om&oldid=1580571"
This page was last edited 11:21:52, 2016-06-20 by LibreOffice Help user WikiSysop.